Global Voices teny Malagasy » Shina: Napetraka ny Blue Dam (rindrambaiko fanivanana sy fanarahamaso) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Febroary 2019 4:57 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Vao haingana ny governemanta ao Beijing no nangataka tamin'ireo mpamatsy tolotra aterineto sy foiben'ny angon-drakitra mba hametraka rindrambaiko antsoina hoe Blue Dam any amin'ny lohamilina rehetra. Araka ny filazan'ny Taiwan Apple Daily News , tokony hanomboka handeha androany (13 septambra 2009) ny Blue Dam raha tsy izany hiharan'ny sazy ireo orinasa.
Azo trohana ato ny rindrambaiko Blue Dam. Ny orinasa momba ny Teknolojia Fiarovam-baovao Shanghai Andatong no namorona ny Blue Dam ary araka ny tatitra iray tamin'ny volana jolay 2009 , in-20 avo heny mahomby kokoa ny Blue Dam (tohodrano manga) raha oharina amin'ny Green Dam (tohodrano maitso) satria fitambarana rindrambaiko sy rindrambainga izy.
Tamin'ny volana jona, dia nitaky tamin'ireo mpanamboatra solosaina iraisam-pirenena ny governemanta ao Beijing mba hametraka rindrambaiko fanivanana antsoina hoe “Green Dam-Youth Escort” amin'ny solosainan'izy ireo tonga amin'ny sambo ao Shina  manomboka ny 1 Jolay. Nialàna ny drafitra tamin'ny farany satria nanohitra mafy ilay fitaovam-panivanana ny fanehoan-kevitry ny vahoaka tamin'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/01/134455/
 ato : http://bit.ly/34iYY
 Teknolojia Fiarovam-baovao Shanghai Andatong : http://www.adtsec.com/profile.asp
 tatitra iray tamin'ny volana jolay 2009: http://www.finet.hk/mainsite/newscenter_story.php?news=PRNEWSBJ&ncode=25823&page=
 hametraka rindrambaiko fanivanana antsoina hoe “Green Dam-Youth Escort” amin'ny solosainan'izy ireo tonga amin'ny sambo ao Shina: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/06/08/china-green-dam-pc-filtering